AH: ချစ်ခဲ့သည်... ချစ်နေသည်… ချစ်ဦးမည်
မိုးတွေရွာနေတုန်း မင်းင့ါကို စိတ်ဆိုးတယ်…..
ငါ့ခွေးနဲ့ မင်း၊ ငါဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်လည်းမေးတယ်……
ဒီမှာ…. မင်းကိုငါ ပရိုမိုရှင်းပေးမှာ မဟုတ်သလို Renovation လည်း လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး
ခါချဉ်ကိုက်ရုံနဲ့တော့ သေနုထိုရ်ကို လွှတ်ပြီး
မင်း ဆဒ္ဒန် ဇာတ်သစ်မခင်းပါနှင့်
မင်းဟာ “မဟာ” မဟုတ်သလို “စူဋ္ဌ”လည်းမဟုတ်ဘူး
မင်းဟာငါ့ရဲ့ Masterpiece၊ အော်ရီဂျင်နယ် ဖယောင်းချက်
မိုးတွေရွာနေတုန်း မင်းငါ့ ပခုံးပေါ် ပါးအပ်ပြီးငိုနေတယ်…
ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင် ငါ ဖန်ဆင်းရှင်ကို အပြစ်တင်တယ်….
မင်းရဲ့ ဘိုးဘေးမျောက်တွေကိုလည်း ငါ အပြစ်တင်တယ်……
မင်းကို ငိုတတ်အောင် ဘာလို့ ဖန်ဆင်းတာလည်း၊ ဘာလို့ သင်ပေးတာတုန်း
မင်းမှာ ငါရှိတယ်၊ ငါ့မှာ မင်းရှိတယ်
ဒါဟာ ထင်တာထက် အတန်ငယ်ပိုပိုသာသာ ပြည့်စုံသည်။
ထိုထက်ပြည့်စုံအောင် ငါ ဖြည့်စွမ်းမည်။
ဒီမှာ အချစ် မျက်ရည်သုတ်ပြီးတော့သာ ငါ့ကို ပြုံးပြစမ်းပါ…..
by A.H (၄၊အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁။ ၁၄:၂၀)
Posted by AH at 10/04/2011 07:24:00 PM
စံပယ်ချို October 4, 2011 at 8:34 PM
AH October 4, 2011 at 8:39 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jas.... :)
Candy October 4, 2011 at 11:35 PM
ကောင်းတယ်ဂျ.... ဒီလိုလေးတွေလည်း ရေးဦး... :D
ဘကြီးထွဋ် October 5, 2011 at 1:24 AM
ဘဘတို့ဒါမျိုးမှ သဘောကျတာကွ.. ဆက်ရေးကွ နာ့တူရ..ဟိ
mstint October 5, 2011 at 2:01 AM
ထဝရစိတ်ကြည်နူးစွာနဲ့ချစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း အားပေးသွားတယ်နော်။
AH October 5, 2011 at 1:51 PM
သို့ ဘကြီးထွဋ် ခွေးလည်း ပါသဗျ..... မှ တူမောင်ထွဋ်
အန်တီတင့် ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည်ရပါလို၏ ခင်ဗျာ
Green October 22, 2011 at 3:16 PM
အရမ်းမိုက်တဲ့ ရစ်သမ်လေး တစ်ခုလိုပါလားဗျာ